Ukuzalisa adaptha - China Shandong Zhongbaokang Medical
Adaptha igutyana, usiba samandla, kagesi Common
Adaptha isitsha: wawuqalekisa igutyana samandla kwenza ukutshintshelwa ulwelo Pharma-ceutical ukusuka ezineengqayi ukuya Ampoule. Igutyana adaptha sicinezelweyo ngokuqinileyo phezu kwentloko igutyana.
Pen adaptha: I iadaptha ipeni ingasetyenziswa ukutshintshela insulin ngqo ukusuka usiba kulo ampoule kwaye idibanisa kunye uninzi kweentlanti ezikhoyo. Oku kwiglasana ebethelelwa kwi usiba endaweni yenaliti.
iadaptha Common: Le iadaptha eqhelekileyo yenza ukuba bazalise ampoules kunye amayeza ulwelo zonke izitya ezikhoyo ngokorhwebo.
abawaziyo-ukusetyenziswa olunye ukuzaliswa iadaptha: Cap, umnini inaliti kunye inaliti zokutyubhisha.
Previous: injector Needleless